आगामी २४ घण्टामा कहाँ कहाँ हुदैछ भारी वर्षा ? मौसमसम्बन्धि भर्खरै आयो यस्तो ताजा अपडेट – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आगामी २४ घण्टामा कहाँ कहाँ हुदैछ भारी वर्षा ? मौसमसम्बन्धि भर्खरै आयो यस्तो ताजा अपडेट
काठमाडौं । मनसुनी वायुको प्रभावसँगै मुलुकका विभिन्न भू-भागमा अहिले वर्षा भइरहेको छ । महाशाखाकाअनुसार हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश ५ का केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षा भईरहेको छ।महाशाखाकाअनुसार देशका सबै प्रदेशहरुमा सामान्य बदली रही सबै प्रदेशका धेरै स्थानहरुमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
वर्षातको समयमा पानीजन्य रोगको जोखिमबाट कसरी बच्ने ?वर्षातको समयमा पानीजन्य जीवाणुबाट हुने रोगको जोखिम बढ्छ । विषेशगरी यो समयमा डेङ्गी, मलेरिया, जण्डिस र झाडापखालाजस्ता रोगहरुको जोखिम बढ्ने ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका फेमिली फिजिसियन डाक्टर विश्वराज दवाडीले बताएका छन् । वर्षातको समयमा भेल पानी बगेर धारा तथा कुवामा फोहोर हुने गर्छ । त्यही पानी मानिसलेसमेत पिउनका लागि प्रयोग गर्दा पानीजन्य रोगको जोखिम हुन्छ ।
डेङ्गी डेङ्गी रोग एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ । खासगरी पानी जम्ने टिनका डब्बा, रङ्का खाली डब्बा, थोत्रो टायर, अलकत्रा वा मट्टीतेलका खाली ड्रमहरू, फुलदानी, गमला र पानीका ट्याङ्की आदिमा यसले फुल पार्छ । सहरी क्षेत्रमा यस्ता बस्तुहरू धेरै हुने भएकाले यो लामखुट्टे सहरमा बढी पाइन्छ । एडिस नामक लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसोको समयमा टोक्ने गर्दछ ।